Silicon manganese alloy (SiMn) nwere ihe ndị dị na silicon, manganese, iron, obere carbon na ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Mmetụta nke mgbakwunye nke silicomanganese na nchara: silicon na manganese nwere mmetụta dị mkpa na njirimara nke nchara
Ferrosilicon bụ ụdị ferroalloy nke mepụtara site na nbelata silica ma ọ bụ ájá nwere coke n'ihu ígwè. Sourcesdị ígwè a na-ahụkarị bụ iron scrap ma ọ bụ ihe igwe. Ferrosilicons nwere ọdịnaya nke silicon ihe ruru 15% ka emere na ọkụ ọkụ gbawara na brik ọkụ acid.
Ferromanganese bụ ụdị ferroalloy nke nwere iron na manganese. Emere site na ikpo ọkụ nke oxides MnO2 na Fe2O3, na carbon, nke na-abụkarị kol na coke, n'ime ọkụ ọkụ ma ọ bụ igwe eletriki ọkụ. a na-akpọ a ite mmiri ọkụ aak.
Ferrochrome (FeCr) bụ alloy nke chromium na ígwè nwere ihe dị ka 50% na 70% chromium.Over 80% nke ụwa ferrochrome na-tinye n'ọrụ na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara. Dabere na ọdịnaya carbon, enwere ike kee ya: % -0.5%), Micro carbon ferrochrome / MCFeCr: (C: 0.03-0.15%). China maka ịbawanye ụba nke mmepụta ferrochrome ụwa.
Ferromolybdenum bu ferroalloy mejuputara molybdenum na igwe, n'ozuzu ya nke molybdenum 50 ~ 60%, nke eji dika ihe mmako alloy na nchara. ezi kristal
Igwe anaghị agba nchara shot waya bụ anyị akpan akpan special.It ka nke SUS200, 300, 400 usoro igwe anaghị agba nchara waya bee n'ime agba. Igwe anaghị agba nchara ịkpụ waya shot a na-eji na-amụba ọnụ ọgụgụ nke mkpa ngwa ebe ferrous ofufe na ọgbụgba ọkụ igwe anaghị agba nchara, titanium
The esorowo igwe anaghị agba nchara shot ka nke SUS200, 300, 400 usoro igwe anaghị agba nchara waya na ala n'ime bọọlụ nke dị iche iche roundness.Stainless steel shot has good heat resistance, corrosion resistance, kenkowaputa surface.It nwere ike zuru okè mmetụta na igwe anaghị agba nchara workpieces
Igwe anaghị agba nchara ogbugba bụ ụdị mgbasa ozi nke na-ewu ewu. Ngwaahịa a yiri nke a na-agba nchara, agbanyeghị, ejiri igwe anaghị agba nchara. O nwere otutu nickel na chromium. Ọ bụ ezigbo mgbasa ozi iji tụlee mgbe mmetọ ọrụ nke ọrụ ahụ enweghị ike ịbụ
High Carbon mechie Steel Shot
High carbon ígwè shot, mere nke pụrụ iche ígwè, obi tara mmiri na n'obi, nwere a ọdịnaya na carbon ukwuu karịa 0,85% .n'ime atomization usoro, * Tụkwasị na ahụ mere nke a wụrụ awụ steel.Fengerda nditịm akara ọ bụla njikọ nke mmepụta, karịsịa akara deoxidation na decarboniza
Obere Carbon Na-agbaze Steel Shot
Obere ihe nchara ikuku nwere obere carbon, phosphorus na sọlfọ karịa elu carbon steel gbaa. Ya mere, ihe dị n'ime ahụ nke obere carbon gbaa dị ntakịrị karị. Obere ihe nchara ikuku nke dị nro dị nro ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nke dị elu.
Aluminom gbaa / bee waya shot
Aluminom bee-waya shot (Aluminom Shot) dị na mbuaha aluminum akara ule (4043, 5053) nakwa dị ka alloy akara ule dị ka ụdị 5356. Ngwakọta anyị agwakọtara na-enye etiti B (Ihe dị ka 40) Rockwell ekweghị ekwe mgbe ụdị 5356 ga-enye Rock Rockwell dị elu B ekweghị na 50 ka 70 nso.
Red Copper shot / ọla kọpa ịkpụ waya shot
1. Wepu ihe na-egbuke egbuke ruo 0.20 ″ site na nkedo na-enweghị mbibi
Na-ebelata eyi na akwa na akụrụngwa gbawara
Na-ewepu agba na ihe mkpuchi ndị ọzọ n'emebighị elu nke akụkụ ahụ
A na-edebe ihe nkiri nke zinc na akụkụ nchara n'oge okirikiri na-enye nchedo mkpụmkpụ oge
Zinc shot / Zinc ịkpụ waya shot
Anyị na-enye ogo dị iche iche nke Zinc Cut Waya Shots. Dị na eru udu, anyị na ngwaahịa belata eyi na dọkatụrụ adọka na gbawara akụrụngwa. Ngwunye waya ndị a na Zinc dị nro karịa nchara waya nchara ma ọ bụ ngwaahịa nkedo. Zinc ịkpụ waya shot dị dị iche iche nha.
Alloy egweri ígwè shot dabere na elu-carbon ígwè shot, obere-carbon ígwè shot, na ala vanadium ígwè shot, n'ịtụle kearu-adịghị ike nke n'elu ngwaahịa: ikuku onu, cracks, ekweghị ekwe dị iche, ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa site reaserch na ibe ya bụrụ teknụzụ, ọ nwere ike họrọ ihe dị iche iche
Ibe ya bụrụ ígwè roling bọl ka nke gburugburu ígwè dị ka akụrụngwa, nke a na-ahụ esichara site ọhụrụ Rolling na ibe ya bụrụ na nkà na ụzụ na mgbe arụpụtara site pụrụ iche okpomọkụ ọgwụgwọ technology.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ahụmahụ nchịkọta na ule ugboro ugboro,
Bee waya gbara / Waya ohuru
A na-arụpụtaghị Shot Waya site na waya dị elu nke a na-egbutu ogologo ya na dayameta ya. Enwere ike iji waya waya mepụta Cut Waya Shot nke Carbon Steel, Igwe anaghị agba nchara, Aluminom, Zinc, Nickel Alloy, Copper ma ọ bụ alloys ndị ọzọ. Ọ ka nwere nkuku dị nkọ site na ọnwụ
Bee waya gbara / Waya eji
The recycled ígwè ịkpụ waya shot bụ ụdị ngwaahịa nke na-eji recycled ihe onwunwe, ya ihe onwunwe na-eri bụ ala, na ike na-emepụta elu kpọmkwem ngwaahịa, ụdị ngwaahịa nwere ike na-eji ọcha nkedo elu. Maka ndị ahịa na - enweghị ndị pụrụ iche
A na-arụpụta nnukwu ikuku carbon angular site na ikuku carbon steel. Ngwongwo nchara nke a na-etipia site na udiri ihe di iche iche ma mezie ka isi ike ato di iche iche (GH, GL na GP) iji kwado ihe di iche. A na-ejikarị ihe eji eme ihe dị elu dị ka mgbasa ozi maka ire ere
A na-arụpụta obere carbon angular grit site na ala carbon
Ọkpụkpụ akpụkpọ ụkwụ na-echi ọnụ n'ala granular.
Iburu Angular Steel Grit ka nke agbajikwa agba plate.The agba ígwè nwere MoR, Mo obere ọcha, o nwere ezi kwụsie ike n'ime Ọdịdị .Bkpị ihe anguler ígwè grit nwere elu anụ arụmọrụ, elu na-eyi ndị na-eguzogide, ya na-arụ ọrụ ndụ bụ 2.5 ugboro dị ka ogologo dị ka ogologo oge akwa-carbon steel grit na obere carbin